China Luxury famolavolana boribory feno fikasihana loko IPS manodidina ny famantaranandro Smart H58 sy mpamatsy | anytec
Famaritana faribolana H58
asa 24 ora dia mitohy ny fitiliana ny tahan'ny fo, ny fitsapana ny tosidra, ny detection marina momba ny torimaso
Fampisehoana fotoana / famantaranandro, kaloria, fatoriana, fakan-tsary, fampisehoana on / off ， Mode Sport, cycle FFemale body
Fampahatsiahivana antso, fampahatsiahivana SMS, fampahatsiahivana qq, fampahatsiahivana Wechat, skype.whatsapp.facebook.linkedin.twitter.viber.line
tadiavo ny telefaona
Famantaranandro fanairana / fampahatsiahivana Sedentary
Fatra tokana amin'ny taha-tahan'ny fo, ny tosi-dra
fepetra arahana efijery Famantaranandro feno / fihodinana feno miaraka amin'ny efijery IPS 1,1 inch Resolution240 * 240
Kinova Bluetooth BLE 4.2
PPG puce HR3313
fahatsiarovana 512KB + 64M
ara-nofo Akorany vy + Tady vy
Haben'ny fonosana Fonosana lanja 148 * 70 * 36MM
Fonosana lanja 146g
Ctn habe 375 * 200 * 315mm
Ny lanjan'ilay loha + tadina tokana 41.5g
Haben'ny fiambenana 39.7mm * 11.3mm * 227mm
Milanja tanteraka (KG) 5.1kg
LANGUAGE UI Sinoa (Tsotra, nentim-paharazana), Japoney, anglisy, frantsay, alemanina, italianina, espaniola, rosiana, portogey, koreanina, poloney
Ampidino / apetraho ny fampiharana ny bracelet Fampandrindrana Android sy Apple App: F FIT
Momba ilay entana:
Amin'ny fahitana voalohany dia misy haitraitra maivana, miaraka amin'ny firaka zinc feno fisainana feno, efijery I1 feno famaritana avo lenta 1,1 * 240d, miaraka amina karazana karazana dilas samy hafa miaraka amina fehezam-boninkazo miloko volamena. miavaka fa afaka mitafy azy mora foana ianao hiasa na hifanaraka amin'ny akanjo mahafinaritra, mifanena amin'ny fotoana samihafa isan'andro.
Araho maso ny tahan'ny fitempon'ny fony amin'ny fotoana tena izy, ary omeo fandinihana feno ny kalitaon'ny torimasoo (torimaso lalina, torimaso maivana ary fotoana ifohazana) hanampiana anao hanana fomba fiaina salama kokoa.
Fampahatsiahivana antso, fampandrenesana hafatra ary fandefasana hafatra, azonao atao ny mahazo antso, SMS ary hafatra SNS ao anatin'izany ny antso ho avy, fampandrenesana SMS, QQ, wechat, Linkedin, skype, mpampiasa hafatra facebook, Twitter, whatsapp, viber, Line, gmail, fomba fijery, Instagram, snapchat.when ny smartphone dia mifamatotra amin'ny finday avo lenta. Hihovotrovotra izany hampatsiahy anao amin'ny fotoan-javatra manan-danja ary afaka mamaky mivantana ireo hafatra amin'ny ampahany amin'ny famantaranandro ianao.
Amin'ny fampahatsiahivana mandritra ny vanim-potoana ara-psikolojika vehivavy, ny famantaranandro marani-tsaina dia manampy amin'ny fampahatsiahivana ny vanim-potoanan'ny fadimbolana mba handinihana ny fitambaran'ny sakafo sy ny fanatanjahan-tena hifehy tsara ny vatana. maminavina ihany koa ny vanim-potoana ara-pisiolojika ho an'ny vehivavy, vanim-potoana azo antoka, vanim-potoana atodinaina, vanim-potoana maha-bevohoka, Tena mifanaraka amin'ny tena ilain'ny vehivavy. Na miasa na milalao.
Fampisehoana fotoana / famantaranandro, famantaranandro, kaloria, fampisehoana on / off, fampahatsiahivana mipetrapetraka, fanitsiana ny famirapiratanana, interface interface, mahita ny telefaona. Fakan-tsary fakan-tsary lavitra (hanozongozongoina hakana sary)
Fanaraha-maso torimaso, araho ho azy ary diniho ny kalitaon'ny torimaso anao tontolo andro ary omenao torimaso lalina, torimaso maivana ary fotoana hifohazana (firaketana fotsiny ny torimaso maharitra mihoatra ny 3 ora).
Namboarina ho tsy tantera-drano IP67, azo atao amin'ny orana, fanasan-tanana, fanasana tarehy sns. FA TSY ho an'ny lomano sy fandroana.
Tohano ny fomba fanatanjahan-tena marobe, ao anatin'izany ny hazakazaka, ny fiakarana, ny tongotra, ny mitaingina, ny baolina kitra, ny basikety, ny Pingpong, ny filomanosana badminton.
Teo aloha: Sarin-tsarimihetsika miloko fo GPS Tracker fanatanjahan-tena marani-tsaina ho an'ny fanatanjahan-tena H3
Manaraka: Vehivavy tsara tarehy mijery vehivavy tsara fanatanjahan-tena fehin-tànana H8
Skrin-doko foko GPS Tracker fanatanjahan-tena ...
Vehivavy tsara tarehy mijery vehivavy tsara fanatanjahan-tena bracele ...